Fittings kagesi abakhiqizi futhi abahlinzeki - China Electric Power nokufaka Factory
Ukufakwa kwamandla kagesi Abakhiqizi bezinsimbi zokuphonsa
Ukufakwa kwamandla kagesi izingxenye zobungcweti ezisetshenziswayo
Amandla kagesi nokufakwa kwekhwalithi ephezulu izesekeli zokuphonsa eChina
Kuwo wonke amakhulu eminyaka, izinhlanganisela ezahlukahlukene zezinto zokusetshenziswa zenziwe ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zensimbi. Eminye imikhiqizo esetshenziswayo isetshenziswa ezinjinini ezidinga ukubekezelelana okuphezulu kokushisa nokubanda. Amapayipi ensimbi okusakaza kufanele amelane nokugqwala nezingcindezi eziphakeme. Ezinye izingxenye zokulingiswa kumele zingasindi kepha zihlale isikhathi eside. Kuzinhlelo eziningi, izingxenye zenzelwe ukuvumela ukubekezelelana okuqondile phakathi kokunwetshwa nokusikwa.
Ukufakwa kwamandla kagesi Izesekeli zokuphonsa Ukulethwa okusheshayo
Ukuze ubone ngeso lengqondo inqubo yokusakaza yensimbi kuze kube manje, zicabange uhamba olwandle ubheke olwandle. Bheka i-footprint oyishiya ngemuva esihlabathini esimanzi. Unyawo lwakho luyoba umnyombo, futhi umbono oshiywe esihlabathini uyisikhunta sonyawo lwakho.
Ukufakwa kwamandla kagesi Ukusakaza izesekeli zamandla Ukulethwa okusheshayo